6 zvigadzirwa zvekudyara mune inodonha stock market | Ehupfumi Zvemari
6 zvigadzirwa zvekudyara mumusika unowira wemusika
Mukutarisana nezvingaitika mu2018, vazhinji vanoongorora zvemari vanotenda kuti chiitiko ichi chinoguma ne chiratidzo chisina kunaka mumakisi makuru stock stocks yenyika. Aya mamiriro haazove anoshamisa kwazvo pamberi penzvimbo yekurovedza muviri mu mubhadharo vanga varipo mumisika yemari. Chaizvoizvo kubva dambudziko rehupfumi parakapera uye izvo zvakakonzera chikamu chakanaka chevatengesi kuwedzera pfuma yavo. Nekudaro, aya mamiriro anogona kusadzokororwa gore rino. Uye saka zvichave zvakafanira kufanoyambirwa kugadzirisa iri dambudziko. Saka kuti nenzira iyi, mari inowanikwa inogona kuiswa mune chirevo chemari mukupera kwegore.
Ichokwadi chisingarambike kuti zvigadzirwa zvemari vanga vachijairana nemamiriro matsva yemisika yemari. Uye mune iyi pfungwa, kudonha kwemusika wemusika hakugone kuve wakasarudzika. Chaizvoizvo zvinopesana, akateedzana mafomati ekudyara akagadzirwa mune ekupedzisira ayo anotendera vashandisi kuti vaite mari yavo kuchengetedza kunyangwe mumamiriro akashata kwazvo. Ndokunge, uine downtrend muzvikamu. Iko kwaunogona kuwana mari hombe yemari kupfuura iwe yaunogona kufungidzira kubva pakutanga.
Izvi zvigadzirwa zvakaomesesa asi zviripo kune vese vadiki nepakati varimi. Vanovavarira vhura kutenga nekutengesa mashandiro yezvikamu pamusika wekutengesa. Asi kwete chete sezvo ivo vakavhurwawo kune mamwe emari midziyo yakakosha kukosha. Kubva kune yakakosha simbi simbi kusvika kunyangwe zvimwe zvakakosha zvigadzirwa pamisika. Sezvauri kuona pazasi, hauzove nematambudziko anoshanda muzviitiko pakutanga zvinopesana nezvinodiwa. Iwe unoda kuziva here zvimwe zveizvi zvakakosha zvigadzirwa?
1 Zvigadzirwa zvemari: kutengesa chikwereti
2 Imwe sarudzo: kuchinjana-kutengesa mari
3 Inverse mari yekudyara
4 Warrant: chigadzirwa chakaomesesa
5 Mari dzinobva
6 Zvigadzirwa zvinogadzirwa pamusika wemasheya
Zvigadzirwa zvemari: kutengesa chikwereti
Imwe yemamodheru inonyatsoratidza maitiro aya chikwereti kutengesa. Makanika ayo anoenderana nekuti kubhadhara kwebasa kunoitwa kwenguva yakareba chero chigadzirwa chikave chakarongeka. Kuti uite chibvumirano, zvinongodiwa kuti uone kuti a value ichaenda pasi Mumavhiki anotevera. Uye bheja zvakaoma pachiitiko ichi. Kana mamiriro aya akasangana, hapana mubvunzo kuti iwe uchawana mari yakawanda. Kupfuura kuburikidza nezvimwe zvigadzirwa zvemari. Asi kana zvisiri, njodzi yakanyanya kukwirira nekuti iwe uchave nemikana yakawanda yekusiya maeuro mazhinji munzira.
Kutengesa kiredhiti, kune rimwe divi, ndeye fomati yakanyanyisa izvo zvinoda ruzivo rwakadzama rweichi chigadzirwa chemari. Iko njodzi iriko nguva dzose mukuita kwako. Chero nzira, iri mari yekudyara iyo iri kuve inozivikanwa pakati pevamwe vane ruzivo varimi. Nekuda kweizvozvo, iwe hauzove nerudzi rwematambudziko ekuhaya kubva kune chero yemari institution. Kusvika padanho rekuti chikamu chakanaka chavo chinokupa iwe zvinopa uye kukwidziridzwa kuitira kuti iwe ugone kuchengetedza mari mune yega yeakavhurika mashandiro.
Imwe sarudzo: kuchinjana-kutengesa mari
Imwe nzira inoshanda kwazvo iyo yauinayo zvino inogadzirwa kuburikidza neEFs kana mari yekuchinjana-yakatengeswa. Iko kusanganiswa pakati pemari inowirirana nekutenga nekutengesa migove pamusika wemasheya. Kubatsira mune ino kesi ndeyekuti haina kuganhurirwa kune chete bhegi. Asi iwe unogona kubatsirwa kubva mukuvhiya kusvika kune yakaderera mune zvimwe zvinhu zvemari. Semuenzaniso mune yakatarwa mari, mbishi zvigadzirwa kana simbi yakakosha, pakati pezvimwe zvakakosha zvinhu. Uye zvakare, funga makomisheni ayo asinganyanyoda uye ayo achakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako.
Shanduko yekutengesa mari chigadzirwa icho chinonyanya kukodzera mazwi epakati ekugara zvachose. Nechisungo chinodikanwa chekuve neinishuwarenzi chaiyo iyo iyo kuderera kwezvinhu zvemari yakasarudzwa. Asi chenjera kwazvo, nekuti chero kukanganisa mune mahesera kunogona kuomesa mashandiro kusvika pamatanho anokuisa iwe mudambudziko rakakura remari. Neichi chikonzero, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekusarudza yakakodzera nguva yekunyorera. Kwete muhomwe umo iwe unogona kupinda nekubuda kakawanda sezvaunoda. Hazvishamise kuti ichi ndicho chimwe chehunhu hunotsanangura kutsinhana-kutengeswa kwemari. Kupesana nezvimwe zvigadzirwa zviri nyore kugadzira zviri pamutemo chero nguva uye mamiriro.
Inverse mari yekudyara
Ndicho chigadzirwa chinonyatsoratidza maitiro aya. Nekuti zvinoreva kuti zvigaro zvemahara zvinogona kutorwa pane huru indices yequity yepasi rose. Kubva paIbex 35 kusvika paEurostoxx 50. Iko, sekudzikira kwazvinoita zvakanyanya, mari yawakaisa muzvinzvimbo zvemubvumirano fund ichawedzera. Izvo zvakare zvinobatsira nekuti zvinosanganisira akateedzana emakomisheni anogamuchirwa nevaridzi veichi chigadzirwa chemari.
Ichokwadi kuti kupihwa panguva ino hakuna kunyanyisa, kunyangwe iwe uchigona kugutsa chako kudiwa pasina dambudziko. Kubva kubhangi rako iwe unogara uine muenzaniso wekudyara weaya maficha. Kunyangwe pasina kupokana kuti iwe unofanirwa kuve wakanyatso kujekesa kuti musika wemasheya uri kuzodzikira mukati memasangano anotevera. Nekuti kana zvisiri izvi, iwe unogona kurasikirwa zvakanyanya mune yega yega yekuvhura mashandiro. Hazvishamise kuti mari yekudyara ndeimwe yezvigadzirwa zvemari zvine njodzi huru. Zvinoda kuti iwe uve wakanyatsojeka nezve izvo zvinogona kuitika mune ramangwana.
Warrant: chigadzirwa chakaomesesa
Izvo pasina mubvunzo chimwe chezvigadzirwa zvemari zvinoda hukuru hutsika hwemari pane iwe chikamu. Unogona kubheja pane dzinorasikirwa nzvimbo dzekuchengetedzwa kwakasarudzwa. Iine runyorwa rwakakura rwemakambani akanyorwa, uko vamiriri veinosarudzika indekisi yemakero emunyika anomira nekuda kwavo kwakakosha kukosha. Asi zvakare, njodzi ndiro dambudziko hombe rekumisikidza mvumo kubva zvino zvichienda mberi. Iwe une zvakawanda zvigadzirwa zvine izvi zvinodiwa. Ose ari mairi mafomati uye mune yekufona. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemhando dzakakosha kutora mamiriro ekumusoro mumisika yemari yemari. Pamusoro pechero chipi zvacho chaungawana mune yazvino kubhengi kupihwa.
Kana mvumo yakasiyaniswa nechimwe chinhu, imhaka yekuti chiri chigadzirwa chine hukasha chaunogona kuita chinobatsira munguva pfupi. Kubudikidza nehuremu sisitimu inovasiyanisa zvakanyanya kubva kune imwe. Kune rimwe divi, ivo vane imwe yemakwikwi anonyanya kukwikwidza pamusika. Pamusoro pekutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa. Izvo hazvifanirwe kunge zvichishayikwa mune yako yekudyara portfolio kana iwe uchinyatsoda kutora mukana wekudzika kwekufamba kunoitika mune equities. Nesimba rakakwirira rekuongorora. Kunyangwe kana iwo mamiriro anodikanwa asina kusangana, unogona kurasikirwa maeuro mazhinji munzira. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira chaizvo nemhando idzi dzekushanda.
Ivo vanozivikanwa zvakanyanya se ETFS uye vanoonekwa sevanovhurika kune mamwe emari mari kunze kwemusika wemasheya. Zvakadai se, semuenzaniso, mbishi zvigadzirwa kana simbi yakakosha, seimwe yesarudzo inofarirwa zvakanyanya nevashambadzi vadiki nepakati. Icho chigadzirwa chemari chinova musanganiswa pakati pemari inowirirana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya mumari. Nenguva yekusingaperi inoenderana neyepakati izwi. Iyo inoiswa kune akaenzana, zvikamu uye indices. Zvese mumisika yenyika uye kunze kwemiganhu yedu. Chero zvazvingaitika, iyo ndeimwe yezvakakosha zvigadzirwa zvemari kune chero ipi zvayo downtrend yakakosha munyu wayo.
Zvigadzirwa zvinogadzirwa pamusika wemasheya
Tiri kutarisana nechigadzirwa chakaomesesa pane zvese nekuda kwehunhu hwayo uye makanika kushanda pamwe navo zvinobudirira. Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti kuhaya kwavo kunoda ruzivo rwakakura mukuita kwavo. Nekuti iwe unogona kumhanyisa njodzi yakakomba yekuvhiringidzika mumazano iwe aunoshandisa kuita kuti zviwanikwa zvekudyara zvibatsire. Iyo yemhando yekudyara inoyevedza kwazvo uye inoda imwe huwandu hwekudzidza kuitira kuti iwe uve mune yakanakisa mamiriro ekuti kuchengetedza kwako kubatsirwe nekukasira uye, pamusoro pezvose, kunogutsa kwezvaunofarira semudyari mudiki nepakati.
Iyo inounganidza iyo bearish maitiro nekuvimbika kukuru nekuti inomiririra mafambiro aya nehukuru hwakasimba. Mupfungwa iyi, ndeimwe yeanosarudzika nevatengesi vane hukasha avo vanoda kuwana mabhenefiti akakwana mukushanda mumisika yemari. Kunyangwe nekuda kwehunhu hwayo hwakakosha, inofanirwa kuiswa mune yakaderera-kukosha mashandiro. Chaizvoizvo nekuda kwenjodzi yekufamba kwake kwese. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chakafanana kurasikirwa nechakanaka chikamu chemipiro yako yezvemari.
Sezvaungave iwe waona, chokwadi chekuti bhegi rinodzika hachifanirwe kuve chinopesana nekuita kwakanaka. Kune izvo iwe une izvi zvigadzirwa zvinogona kukubatsira iwe mune inopfuura imwe nguva. Dzimwe nguva apo shanduko yemari isingadiwe nevadiki vepakati nepakati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » 6 zvigadzirwa zvekudyara mumusika unowira wemusika
Makiyi mashanu ekudzivirira mari yako yekudyara
9 matipi ekubudirira kugadzirisa musika wekutengesa muna 2018